किर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले राखे नया विश्व कीर्तिमान , आफ्नो रेकर्ड आफैले तोडे
कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले फेरि पनि राख्नु भएको छ। २२ औ पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहन गरेर किर्तिमान राख्नु भएको शेर्पाले २३ औं पटक आरोहण गरेर आफ्नै किर्तिमान तोड्दै नयाँ विश्व कीर्तिमान राख्नुभएको हो । सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्नु भएको शेर्पाले २३ पटकको आरोहण गर्दा उहाँले तिब्बतबाट चढ्नु भएकाे हो।
बुधबार बिहान ७ बजेर ५० मिनेट जाँदा ४९ वर्षिय कामिरिता शेर्पा र निमा ओङ्दी शेर्पाले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर नया किर्तिमान राखेका हुन् । उहाँकाे आरोहण कम्पनी सेभेन समिट्स ट्रेक्सका टासी लाक्पा शेर्पाले आरोहणको पुष्टि गर्दै ’यो राष्ट्रकै गौरवको कुरा’ भएको बताउनुभएकाे हो। कामिरिता शेर्पाले २५ पटक सम्म सगरमाथाको शिर चुम्ने लक्ष्य राखेका छन । सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका शेर्पाले सन् १९९२ देखि नै हिमाल चढ्न थाल्नु भएकाे थियाे ।
धेरैपटक सगरमाथा आरोहण गर्नेमा अहिलेसम्म तीन नेपाली शेर्पाहरुको किर्तीमान रहेको छ । आप्पा शेर्पा र फुर्बा तासी शेर्पाले २१ पटक सगरमाथा चढेर किर्तिमान राखेका थिए । आप्पा शेर्पाले सन् २०११ मा र सन् २०१३ मा फुर्बा तासी शेर्पाले रेकर्ड २१ पटककाे रेकड राखेका थिए ।आङरिता शेर्पाले पनि १० पटकसम्म बिनाअक्सिजन सर्वोच्च शिखर पुगेका रेकड राख्नु भएकाे छ । आपा र आङरिता दुवै जना कामिरिताकै गाउँ थामेका अग्रज हुन्।
खोक्रो आदर्श र झुटो जिन्दगी बाँच्नु छैन भन्दै रविले सबैलाई भाबुक बनाउदै लेखे ( भिडियो सहित )
“गलबन्दी” माथि चोरीएको आरोपमा प्रकाश सपुतले दिए यस्तो जवाफ ( भिडियो हेर्नुस )
Previous Article आज बिहिबार तपाइको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस तपाइको राशिफल…
Next Article दुबै मृर्गौला फेल भएकी कोपिलाको जिबन बचाईदिन अपिल ! छोरीहरुका लागि बाँच्न चाहन्छु